'बिजुली तार भूमिगत गरिएका ठाउँबाट लगेर मिटरमा जोडिदिन्छौं, थप पैसा लिन्नौं' (भिडिओ) :: मनोज सत्याल :: Setopati
'बिजुली तार भूमिगत गरिएका ठाउँबाट लगेर मिटरमा जोडिदिन्छौं, थप पैसा लिन्नौं' (भिडिओ)
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख तारा प्रधान। तस्बिर : सेतोपाटी
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौंमा विभिन्न स्थानमा विद्युतको तार भूमिगत रूपमा बिछ्याइरहेको छ। तार बिछ्याउँदा सडक पेटीमा ठूल्ठूला बाकस राख्दा पैदल यात्रुले सास्ती खेपिरहेका छन्।
भूमिगत तारबाट घरघरमा कसरी विद्युत पुग्छ भन्नेमा मानिसलाई चासोको विषय छ। विद्युत प्राधिकरणले तार भूमिगत गरे पनि ट्रान्सफर्मर सडकका पोलमै राख्ने जनाएको छ।
सेतोपाटीका मनोज सत्यालले विद्युतको तार भूमिगत गर्ने आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख तारा प्रधानसँग कुराकानी गरेका छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा तार भूमिगत गर्ने काम कसरी भइरहेको छ?
अहिले तीन वटा प्याकेजमा काम भइराखेको छ। एउटा प्याकेजमा महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गत एउटा ठेकेदार कम्पनीले काम गरिराखेको छ। अर्को बानेश्वर, कुलेश्वर, बालाजु, कीर्तिपुर र जोरपाटी केन्द्रको काम भइराखेको छ। तेस्रो प्याकेजमा भक्तपुर र ललितपुरको काम हुँदैछ।
अहिले बिछ्याइएको भूमिगत तारमा बढ्दो मागअनुसार बिजुली प्रवाह हुने क्षमता छ?
हामीले मूल सडकमा भएका तारलाई अहिले भूमिगत गरिराखेका छौं। २० देखि २५ वर्षसम्मको क्षमता धान्ने गरी तार राखिराखेका छौं। ओभरहेड प्रणालीको तार प्रतिस्थापन गरेपछि नयाँ क्षमता अनुसारका ट्रान्सफर्मर ठाउँ-ठाउँमा राखेर घरमा पनि भूमिगत प्रणालीबाट बिजुली वितरण गर्छौं। घर-घरमा भूमिगत तारबाट विद्युत पुर्‍याउने काम मुख्यमुख्य ठाउँमा गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। कुनै ठाउँमा भित्री बाटोमा पनि भूमिगत प्रणाली गरिराखेका छौं। यसले हाम्रो सहरी सौन्दर्य राम्रो हुन्छ। तार र पोल देखिँदैनन्। हामीले उच्च क्षमताको तार भूमिगत गर्दा समस्या पनि कम आउने गरी काम गरिराखेका छौं।
विद्युत प्राधिकरणले नै घरघरसम्मै भूमिगत तार जोडिदिने हो?
हामीले तार भूमिगत गरे पनि ट्रान्सफर्मर ओभरहेड नै हुन्छन्। भूमिगत प्रणालीबाट ट्रान्सफर्मरमा जान्छ। त्यसबाट डिस्ट्रिब्युसन बक्समा जान्छ। त्यहाँबाट सर्भिस केबल हुँदै घरघरमा प्राधिकरणले नै जोड्ने व्यवस्था गर्छौं। डिस्ट्रिब्युसन बक्सको भित्र एमसिबी स्विचलगायतका सुरक्षित उपाय अबलम्बन गरिन्छ। त्यहाँबाट घरघरमा लगेर विद्युत दिन्छौं।
घरमा जोड्ने तार किन्नुपर्ने तार लगायतको शुल्क कसले व्यहोर्छ?
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ग्राहकसँग थप पैसा लिँदैन त्यसका लागि। तार लगेर मिटर बक्समा जोडिदिने हो। हामीले ठेक्का लगाएर यो काम गर्छौं।
विद्युत प्राधिकरणले राखेका बाकसले अहिले पैदल यात्रुलाई हिँड्न अप्ठेरो भइरहेको छ। प्राधिकरणले कुनै विकल्प सोचेको छ?
केही ठाउँबाट हामीलाई गुनासो आएको छ। ती ठाउँमा हामीले पहिलाको बाकसको डिजाइन ठूलो भएकाले रिडिजाइन गर्न लगाएका छौं। त्यसले गर्दा महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रको बुढानिलकण्ठ, धोबिखोला, बालाजु क्षेत्रमा १२० वटा प्यानल परिवर्तन गर्दैछौं। अलिकति पातलो राखिदिन्छौं। त्यसले गर्दा पैदल यात्रुलाई समस्या हुँदैन। रिडिजाइनको काम भइरहेको छ। ठाउँ बढी ओगट्ने प्यानल हटाउँटौं। त्यसलाई अन्य ठाउँमा प्रयोगमा ल्याउँछौं।
हामीले ठाउँअनुसार प्यानलको साइज राखेका छौं। प्यानलहरू ठाउँअनुसार ५० देखि सय मिटरको दूरीमा छन्। ठाउँको आवश्यकता अनुसारको आकारमा राख्छौं।
विद्युत प्राधिकरणले सडक खन्ने काम गरिराखेको छ। तर पुर्ने काम किन भएको छैन?
ठेकेदार कम्पनीका कारण ढिलाइ भएको छ। हामीलाई पटक-पटक मिटिङ गरेर ठेकेदारलाई चेतावनी दिएका छौं। अब यस्तो समस्या धेरै नआउला। कतिपय ठाउँमा हप्ताको एक दिनमात्र गाडी लगेर काम गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको छ। सकेसम्म खनेको १० दिनमा पिच गर्न ठेकेदारलाई निर्देशन दिएका छौं।
तार भूमिगत गरे पनि विद्युतका सबै पोल हट्दैनन् भन्ने सूचना आइराखेका छन्। कस्ता पोल हट्छन्? कति पोल हट्छन्?
जति पनि चार लेन वा ६ लेनका मुख्य सडकमा हामीले तार भूमिगत गर्छौं, ती ठाउँमा पोल हटाउने नै हो। त्यो राखिराख्ने होइन। तर तत्काल हटाउने अवस्था हुँदैन। किनभने त्यहाँ इन्टरनेटको केबल भएकाले चरणवद्ध रूपमा हटाउने हो। अहिले जुन-जुन ठाउँमा तार भूमिगत गरिएको छ, त्यो ठाउँमा हटाउने नै हो। त्यहाँ खुल्ला नै हुन्छ। इन्टरनेट कम्पनीलाई हामी तार हटाउन समय दिन्छौं। अहिले हामीले तार भूमिगत गर्दा अप्टिकल फाइबर पनि राखेका छौं। इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भाडामा लिन सक्छन्। त्यसका लागि सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग छलफल गरेर मोडालिटी तय गर्न बाँकी छ। त्यस्तै हामीले थप दुइटा डक्ट भूमिगत गरेका छौं। त्यो विभिन्न दूरसञ्चार कम्पनीले अप्टिकल फाइबर लैजान सक्छन्। त्यस्तो डक्टलाई हामीले भाडामा दिन सक्छौं।
काठमाडौंका कतिपय गल्लीमा पनि तार भूमिगत गरिएको छ। ती ठाउँका पोलहरू पनि हट्छन्?
तार भूमिगत भएका ठाउँमा पोल हट्छन् नै। अहिले भूमिगत गर्ने कम्पनीले त्यो काम गर्दैन। हामीले छुट्टै ठेक्का निकाल्छौं। त्यसबाट हटाउने काम गर्छौं।
भूमिगत तार बिछ्याउने काम कहिले सकिन्छ?
रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रको तार भूमिगत गर्ने कम्पनीको ठेक्काको म्याद एक वर्ष थप भैसकेको छ। महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गत ५० प्रतिशत काम भइसकेको छ। रत्नपार्क वितरण केन्द्रको ४० प्रतिशत काम भएको छ। रत्नपार्क वितरण केन्द्रको सडक खन्नुपर्ने भएकाले त्यसको अनुमति आउन सडक विभागबाट ढिलाइ भएकाले काम बाँकी भएको हो। सडकबाट अनुमति नआउँदासम्म हामे ठेक्का निरन्तर गर्नुपर्ने हुन्छ।
अन्य स्थानहरु बालाजु, बानेश्वर र कुलेश्वरमा ठेकेदार मोबिलाइजेसन भएको ६ महिना नाघेको छ। त्यसको काम बल्ल सुरू भएको छ। भक्तपुर र ललितपुरको काम ठेक्का सम्झौता भएर डिजाइनको काम भएको छ। ठेकेदारको सामान आउन बाँकी छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत १०, २०७८, ०२:०५:००